Earphone - odlala miniature ne isikhulumi nebhethri. Kuyinto encane ukuze ibekwe endlebeni futhi engabonakali ngokuphelele kwabanye. Lapho ukulethwa yimuphi izivivinyo le into ngokuphelele zibalulekile.
Leli thuluzi lomculo Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga. Kodwa kubiza kakhulu hhayi ezishibhile! Nokho, izingcweti zithi ungenza yesifakwandlebeni ngezandla zakho. Futhi wena zonke siqiniseke ukuba sifake ku uma une okungenani nolwazi olukha phezulu e-electronics.
Ukuze lo mbuzo: "kanjani efakwa endlebeni," impendulo: "Akunzima, kodwa umsebenzi obucayi kakhulu, futhi-ke, adinga ukunemba okukhulu.".
Yonke isethi inezingxenye eziningana: umakhalekhukhwini, ama-headphone kusukela libe umakhalekhukhwini ubudala futhi kuspikha sendlebe uqobo ngqo.
Uhlelo lusebenza kanje:
Umsizi uthumela ulwazi olufanele kuselula yakho.
Ngu tube exhunywe-headphone ezishintshwe. Lo mklamo ukhonza njengoba antenna okuxhunyanwa.
Ukuthola antenna ibekwe ngedivayisi endlebeni.
Indlela yokwenza yesifakwandlebeni ngezandla zakho? Okokuqala Remake-headphone. Ukuze wenze lokhu, nginqume ngilungele ekhelini. Khona-ke kukhishwe nemakrofoni unsolder. Ngeke badinga impendulo isikhokhelo.
Solder imakhrofoni nomzimba omncane ezimbili wire ikhebula ukuze ubude, i-microphone kungaletha endaweni oqaphelayo elula, efana collar noma tie.
Izintambo kwesokunxele neziteshi kwesokudla embobeni kuthiwa kuhlobene.
Manje sinesizathu amaphuzu amabili: Channel Khomba bese wire ezivamile. Lezi uzobe soldered inductance (loop wire elincanyana), letawuba antenna okuxhunyanwa.
Ngo kokuhlinzwa, ifoni yonkana inductor kuzodala modulated kazibuthe. It zizokwenziwa we micro-antenna exhasa, futhi ngeke uzwe izwi interlocutor yakhe. Konke isebenza isimiso yesenzo i transformer abavamile.
Siyaqhubeka nokwenza yesifakwandlebeni ngezandla zakho, uma izandla akuzona ukhathele, yebo. Ukuze womshini loop okuxhunyanwa udinga iyiphi into round ezizosetshenziselwa njengesibonisi ngoba emazombezombe. Ifanele ingilazi jar. Kudingeka wayisa pel 0.08 - 0.1 mm.
On the amabhange ayaqaphela kakhulu thina igcine ikhoyili. Ukumelana kufanele kube ngu-40 ohms. I isiqedile esondweni amafutha nge glue mhlophe futhi ususe usebe. Kungaba ukugoqa tape azungezile.
Manje kudingeka solder imikhawulo ikhoyili balahleke wire, vimbela futhi uvikelekile ku emalungeni solder. Imikhawulo yesibili solder kuya "iziteshi" amaphuzu futhi "evamile".
I okuxhunyanwa ingxenye usulungile. What uhlala kuyinto yesifakwandlebeni ngezandla zakho. Lokhu kuyodinga: i tekusebenta amplifier TDA 7052, 1956 TEM isikhulumi amancane noma yimuphi omunye (kunalokho yiyona ezincane ngcono), a Resistor 1 - 5.1 Com kakhulu amabhethri amabili amancane 1,5 V (LR kungaba 41 noma 361A) wire pel 0.08 - 0.1 mm. Futhi ngaphezu kubaluleke kakhulu: yesifakwandlebeni ngezandla yakho ukuze wenze nzima kakhulu ngaphandle kokuba umhloli silula.
Manje nowokugcina, yisigaba esibaluleke kakhulu umsebenzi. Chip is banamathela ibhokisi isikhulumi. Phezu kwawo singadukiswa umoya ethola antenna exhasa ukuba ematfuba esiphezulu, inqobo nje emazombezombe akuyona ezenziwa isikhulumi onqenqemeni.
Soldered uxhumano ezikhumulweni 1 no-3. Khona-ke ukuxhuma 2.4 no-5 - kuyinto kwamandla lokususa (phansi).
Solder komunye umkhawulo ikhoyili ukhombe 1.3.
Ukuphela yesibili ngokusebenzisa Resistor uya phansi. Ekuqaleni setha Resistor 1 Com ukhethe inani layo uma kudingeka.
Ngu ezikhumulweni 6 no-7 solder isikhulumi.
Phina 8 - kungcono ukudla + 3 volts.
Ngaphambi ukusetshenziswa wokuqala ngokucophelela ukufakwa ukwahlukanisa.
Phakathi 8 futhi ukuphela + amabhethri ukuxhuma umhloli. Kala ukusetshenziswa zamanje. Kungakuhle kube mayelana 3,5 ma. Kodwa-ke kuvunyelwe 5 ma.
Ukuvula amandla, kuselula ukubamba iyiphi FM-siteshi. Ngo Earpieces kufanele asizwe. Khetha Resistor ivolumu esiphezulu. Sicabanga phezu kokungathembeki amabhethri.
Sabeka umkhiqizo osuphelile ngamapayipi ukushisa Nciphisa futhi cindezela pool eshubile. I umsebenzi usuphothuliwe.
Umuthi 'Nazarel ": ukubuyekezwa. "Nazarel": yokusetshenziswa, futhi intengo analogue
Isonto Pyatnitskaya e Chernigov: isithombe kanye nomlando
"Tonar" - kunjani lokho? Amamodeli kanye Imininingwane